Tranonkala 7 misintona modely Powerpoint lehibe | Famoronana an-tserasera
Toerana tsara indrindra hampidinana ireo môdely Powerpoint ankehitriny
Manuel Ramirez | | dia midika hoe, Templates
Androany dia manana loharano tsy manam-petra isika ary mandritra izany taona vitsy lasa izay dia sarotra kokoa ny nanatona modely avo lentaNiova ny zava-drehetra ka raha mahay mikaroka isika dia afaka mahita kalitao tena tsara. Izany no antony hampisehoana aminao ny lisitry ny tranonkala izay ahafahanao misintona modely hanomezana izany teboka manokana izany amin'ny fampisehoana nataonao.
Ary na dia hilaza ny marina aza Google dia manasarotra an'i Microsoft hatrany, Powerpoint dia mitarika hatrany ny famelabelarana ka na avy amin'ny fampiharana iray aza, ary bebe kokoa amin'ny vahaolana Microsoft 365, afaka manana rakitra eo an-tanantsika isika hanomezana an'io naoty toy ireo zava-nitranga, fivoriana na famelabelaran-kevitr'ireo orinasa ho an'ny mpanjifan'ny filàna izay mety hiara-miasa aminay na mampiasa vokatra.
1 Modely Microsoft 365
5 Karatra na sary mihetsika ao Freepik
7 Fetiben'ny sary mihetsika
Modely Microsoft 365
Toy ny amin'ny Excel na Word, ao aminy ihany Microsoft dia manome antsika modely isan-karazany ka tsy mila mandalo fampidinana maimaimpoana an'ireo fampisehoana ireo akory isika. Amin'ity karazany ity dia manana sokajy iray manontolo izahay izay ahafahantsika miala amin'ny mety ho fampisehoana ny vokatra ho toy ny tetikasa diplaoma farany.
Avy amin'ny rohy nomena dia azonao atao ny mahita maodely Powerpoint amin'ny karazany rehetra hampiasa alika sary, taratasim-baovao, kalandrie, taratasy, mari-pankasitrahana, takelaka, menus, na peta-drindrina mihitsy aza. Ity andiana modely premium ity dia azo ampiasaina hanomezana izany fifandraisana Retro izany amin'ny fampisehoana vokatra na afisy infographic lamaody iray manontolo.
Microsoft Izy io dia maneho antsika amin'ny katalaogy tsara izay tsy azontsika hadino Ary raha manome lanja ny tolo-kevitry ny serivisy rahona izy sy ireo fampiharana mandeha ho azy ao amin'ny birao, ny € 9,99 izay mety ho vidiny isam-bolana, ahena miaraka amin'ny fandoavana isan-taona, dia mety mitentina isaky ny denaria isaky ny euro.
Santionany modely Microsoft - Web
Con Slidesgo dia mandeha amina maodely roa kalitao maimaim-poana izahay tsy mila mila misoratra anarana. Raha ny marina dia afaka misintona portfolio iray manontolo amin'ny endrika Powerpoint isika (ohatra), hahafahanao misaintsaina ny kalitao atolotry ity tranokala maodely Powerpoint maimaimpoana ity.
Manolotra ny azo atao ny misintona azy ireo amin'ny Google Slides Raha tsy izany dia te hifidy Powerpoint izahay na tsy hanana fidirana amin'ilay programa satria ny tombony lehibe indrindra amin'ny vahaolana Google dia ny fahalalahana raha mbola manana kaonty Google izahay. Mikasika ny Slidesgo, tranonkala iray natolotra tsara izy io (ahoana no hilazana azy raha tsy izany), izay anananay ny Espaniola ambony indrindra amin'ny sokajy maro samihafa izay avy amin'ny malaza, fanabeazana, orinasa, varotra, fanafody, multipurpose ary infografika.
En ny iray amin'ireo maodelim-pahefana Powerpoint maimaim-poana dia manome slider ho antsika ny modely mifandraika amin'izany mba hahitantsika ilay iray manokana izay mifanaraka amin'ny filànay na ny lohahevitra ao amin'ny endrika izay tiana hohamafisina ny tetikasa na serivisy nomena. Azontsika atao ny misoratra anarana maimaim-poana hiditra amin'ny fampidinana modely hafa.
Slidesgo - Web
izahay alohan'ny tranokala amin'ny teny anglisy, fa izany dia hahafahantsika miditra amin'ny maodely Powerpoint avo lenta be. Avy amin'ireo pejy maodely tsirairay dia hisintona rakitra ZIP izay ahitantsika ny môdely Powerpoint hampiasaina any aoriana.
Any an-tampony isika dia manana ny menio miaraka amin'ireo sokajy fampidinana modely anao toy ny orinasa, kely indrindra, matihanina, fanabeazana, maoderina na mamorona. Ny tsirairay amin'izy ireo dia mitondra antsika amin'ny modely voalamina ary rehefa tsindrio ny iray dia ho hitantsika daholo ny fampahalalana rehetra, amin'ny teny anglisy, miaraka amin'ny isan'ny slide, ny layout ary na ny fampahalalana mifandraika amin'ny vector an'ny sary ao aminy aza.
Raha izany mampiditra antsika ao anaty pejy misy dokam-barotra marobe, fa raha afaka manilika azy ireo isika dia afaka mankafy modely avo lenta ho an'ny programa Microsoft. Mazava ho azy, amin'ny teny Anglisy dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny manokana ny lahatsoratra isika; zavatra mety hitranga koa raha misintona azy ireo amin'ny Espaniôla isika. Ny iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ity tranonkala ity dia, na dia mamporisika antsika hisoratra anarana aza izy ireo dia tsy mila mandefa mailaka hampiasa ireo maodely tsara kalitao ireo.
Powerpointify - Free download
Eto, ary tsy mitovy amin'ireo roa teo aloha, eny izay mila misoratra anarana vao afaka miditra isika mankany amin'ny modely fampisehoana Powerpoint. Midika koa izany fa hankafizintsika ireo maodely avo lenta amin'ny sokajy rehetra mba hahitana ilay ilainay amin'ny tetikasa na asa ho an'ny oniversite.
Eny, amin'ny teny anglisy izy io, saingy tsy midika izany fa amin'ny fahaizana kely dia afaka misintona modely avo lenta isika. Eo an-tampony dia manana ny menio amin'ny teny Anglisy izay mitondra anay Tabilao Powerpoint, Sarintany, endrika Powerpoint na endrika, drafitra ho an'ny drafitra drafitra fandraharahana, Data & Chart ho an'ny angona sy sary ary tabilao sy tabilao ho an'ny latabatra sy lahatsoratra. Tsy ilaina ny mandika azy fa ny tanjony sy ny tanjony dia azo tsara.
Rehefa efa nisoratra anarana sy niditra dia miditra amin'ny fampahalalana ilaina hahafantarana ny loko loko ny fampisehoana na ny haben'ny slide tsirairay. Tranonkala iray tena matihanina mametraka ny zavatra rehetra tadiavintsika mba hahafahantsika manombana haingana alohan'ny hisintomana ireo modely ananantsika ary maro amin'izy ireo.
Slidemodel - Web
Karatra na sary mihetsika ao Freepik
Freepik Mbola iray amin'ireo tranonkala fisintomana tsara indrindra io amin'ireo karazana sary, rakitra na singa rehetra izay misy ifandraisany amin'ny filàna famoronana sary amin'ny ambaratonga rehetra. Mazava ho azy, manana karatra na slide koa izy io ary ahafahantsika mampiasa azy ireo hanampiana Powerpoint vaovao noforonina taty aoriana.
Avy amin'ny rohy izay omenay eto ambany azonao atao mitadiava slides isan-karazany tsara azonao ampiasaina amin'ny antontan-taratasy noforonina. Izy ireo dia katalaogin'ny slide izay azonao ampiasaina amin'ireo karatra rehetra ireo izay mandrafitra ilay fampisehoana ilainao. Ary mazava ho azy fa manana azy ireo maimaim-poana isika, na dia mandalo ny famandrihana isam-bolana Freepik aza isika dia afaka miditra amin'ny ampahany premium izay mihatsara fatratra ny kalitao.
Ambonin'izay rehetra lazainay satria raha mila zavatra miavaka kokoa isika, ary tsy izay azon'ny an'arivony toa azontsika sintonina manerantany, fa io ampahany io dia mety hahaliana azy araka ny filantsika. Mazava ho azy, raha manana famandrihana amin'ny Freepik isika dia azontsika ampiasaina amin'ny logo, sary masina, sary, fantsona ary maro hafa.
Pikantsary freepik - marary mitsika
iray hafa Tranonkala anglisy ho an'ny karazana maodely fampisehoana rehetra ary izany dia miavaka amin'ny fampisehoana amintsika na dia ny sary teo aloha na ny sary kely amin'ilay môdely aza ny isan'ny slide ao anatiny. Eny, tsy maintsy misoratra anarana ianao mba hisintomana ny katalaoginy manontolo ho fomba hafa mahaliana iray izay anananao hatrany ary mitady modely vaovao.
Ny sokajy rehetra dia voalamina amin'ny tontonana lafiny azo atolotry ny 24Slides. Afaka misoratra anarana amin'ny kaonty Google izahay hidirana amin'ny katalaoganao manomboka izao.
24dalana - Malagasy
Fetiben'ny sary mihetsika
Y nifarana tamin'ny tranokala espaniola izahay mba hampidina modely manana kalitao premium. Tena mitovy amin'ny kalitao sy ny traikefa ananany amin'ny Slidesgo, noho izany avy amin'ny pejy lehibe dia afaka jerentsika ireo sokajy rehetra mifanaraka amin'ny filantsika. Azontsika atao mihitsy aza ny mitady maodely amin'ny loko na mandalo amin'ireo sokajy "mahafinaritra" indrindra toa ny manaitaitra, mamorona, tsotra, ho an'ny fanombohana na orinasa. Fomba mahafinaritra sy mahafinaritra kokoa hamantarana azy ireo mba handehanantsika haingana amin'izay mahaliana antsika.
Eto amin'ity tranonkala ity dia manana modely isan-karazany ho an'ny Powerpoint Ary raha te-hiaraka amin'ny vaovao miaraka amin'ny vaovao ianao, dia azonao atao ny misoratra anarana ao amin'ny taratasin'izy ireo mba ho voalohany mampidina iray.
Toy ny sasany, manome antsika fampahalalana mahaliana toy ny isan'ny slide, ny isan'ny sary masina azontsika ovaina izay ananantsika na ny endrika ampiasaina hahafantarana raha afaka mitifitra amin'ny iray amin'ny 4: 3 na 16: 9 isika. Mila maneho hevitra izahay fa ny modely ampidininao dia azo ampiasaina ao amin'ny Google Presentations ihany koa, noho izany ny fahaizana lehibe indrindra ahafahantsika misintona programa iray na hafa araka izay mahaliana antsika.
Un tranokala tsotra izay mamela antsika hanana an-tànana ny lohahevitra sy ny maodely tena maoderina hanehoana ny maha-matihanina antsika na ny hakanton'ny fomba manokana anolorantsika soso-kevitra sarobidy. Ny amin'ny Espaniôla dia manome ny heviny mba tsy handaniantsika fotoana be loatra amin'ireo mpandika teny.
Fetiben'ny sary mihetsika - Malagasy
Ireo no ilay Toerana tsara indrindra handefasana modely Powerpoint, ary miasa ihany koa izy ireo amin'ny Google Slides. Ankehitriny mba hanovana azy ireo hanomanana an'io asa io na ilay portfolio izay ahafahanao mampiseho ny fahaizanao sy ny toetranao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Templates » Toerana tsara indrindra hampidinana ireo môdely Powerpoint ankehitriny
Avereno jerena ny template mba hisintomana sy hanehoana ny tenanao tsy mbola nisy toy izany teo amin'ny sehatra matihanina
Adobe Premiere dia nohavaozina miaraka amin'ny 'Quick Export' amin'ny fanavaozana ny volana novambra